I-Casa de Agua: Cabaña "La Guarida" Boca del Cielo - I-Airbnb
I-Casa de Agua: Cabaña "La Guarida" Boca del Cielo
Igumbi lakho lokulala e indlu yamaplanga sinombuki zindwendwe onguAlejandro
UAlejandro unezimvo eziyi-97 zezinye iindawo.
Le Ndawo intle yiparadesi elinde wena ngokukhethekileyo!
Kwi- "Casa de agua" sine-palapa entle kunye ne-Hammock ecaleni kwecala le-Lagoon (i-estuary) kunye nenye i-palapa kwicala lase-Del Mar ngoko sinethuba lokutshintsha ukubukeka kwendawo, ubuhle belagoon kunye neentaba ezijikelezileyo, ukuya kumkhenkce omkhulu we-Pacific, zombini kunye neembono ze-paradisiacal. Ubona ukuphuma kwelanga e-Estero nokutshona kwelanga e-El Mar.
Indlu yamaplanga entle enembonakalo yolwandle, enamagumbi aliqela kunye nazo zonke izinto ezinokusetyenziswa.
Inetreyini enkulu enee-hammock kunye negumbi lesidlo sakusasa apho ungabuxabisa khona ubuhle boLwandlekazi LwePasifiki. Ikwayindawo engasemva epholileyo kakhulu nezitulo ezitofotofo ezilungele ixesha lokufunda noxolo .
Le ndlu inebhedi enkulu kunye nebhedi elala abantu ababini okanye enye eyenza ilungele abantu abathandanayo okanye intsapho yabantu abayi-3 okanye abayi-4.
Igcwele ngokupheleleyo inetha leengcongconi ukuze kungabikho izinambuzane kuyo yonke indlu yamaplanga.
Inendlu yangasese enendawo yokuhlambela kunye nazo zonke izinto ezinokusetyenziswa.
Indlu yamaplanga ifumaneka ngaphakathi "Casa de Agua"
Kulapho unokukwazi ukuqesha indlu nganye esemaphandleni ngokwahlukileyo okanye kuyo yonke indlu.
Kwi- "Casa de agua" sine-palapa entle kunye nee-hammock ecaleni kwecala le-Lagoon (i-estuary) kunye nenye i-palapa kwicala lase-Del Mar ngoko sinethuba lokutshintsha imeko, ubuhle belagoon kunye neentaba ezijikelezileyo, ulundi olukhulu lwePasifiki, zombini kunye neembono ze-paradisiacal.
Sinekhitshi elipheleleyo elineoveni yamatye elinamathuba okubhaka isonka esinobuchule kunye ne-pizzas phakathi kwezinye izitya ezimuncis 'iintupha.
Sinegumbi lokutyela elineendonga ecaleni kwekhitshi kunye netafile entle enesidlo sakusasa, isidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa kumthunzi weentende.
Sinezindlu zamaplanga eziyi-3 kwii-complex ezinokuqeshiswa ngexesha elinye, zilapha eAirylvania "Casa de Agua completa"
Ibhedi enkulu eyi-1, 1 ibhedi elala abantu ababini, Iibhedi ekuthiwa zii-hammock eziyi-2
Yindawo ezolileyo nekhuselekileyo